WARBIXIN: Barcelona Oo Kooxaha Yurub Ugu Faantay Koobabka Tirada Badan Ee Ay Ku Soo Guulaystay Rubuc Qarnigii Ugu Danbeeyay Iyo Kooxda Azulgrana Oo Soo Bandhigtay Sida Ay U Noqotay Boqorada Yurub. | Haqabtire News
WARBIXIN: Barcelona Oo Kooxaha Yurub Ugu Faantay Koobabka Tirada Badan Ee Ay Ku Soo Guulaystay Rubuc Qarnigii Ugu Danbeeyay Iyo Kooxda Azulgrana Oo Soo Bandhigtay Sida Ay U Noqotay Boqorada Yurub.
Kooxda Barcelona ayaa muujisay in rubuc qarnigii ugu danbeeyay ay noqotay kooxda Yurub oo dhan ugu koobabka badan isla markaana waxay soo saartay warbixin ay ay ku muujisay sida ay u qabsatay Spain iyo Yurub isla markaana ay u noqotay koox u saaxiib ah koobabka maxaliga ah iyo kuwa Yurub.
Barcelona ayaa warbixintan ku daabacday website-ka rasmiga ah ee kooxdeeda, waxaana warbixintan ka muuqda in Barcelona ay hogaaminayso tartan kasta oo Spain iyo Yurub ah 25 kii sano ee ugu danbeeyay. Taariikhda ay Barcelona soo qaadatay ayaa ka soo bilaamaysa 1991 illaa 2016. Haddaba Barcelona miyay noqotay boqorada yurub iyo Spain? Barcelona ayaa warbixintan ku sheegtay in tirooyinka ama xisaabtu ay iskeed u hadasho oo ayna sharaxaad u baahnayn.
Si kastaba shabakada Laacib.net ayaa isha soo marisay warbixintan, waxaananu halkan idiinku soo gudbinaynaa iyada oo aanu idiin soo turjinay isla markaana dhamaystiran. Warbixinta ayaa ciwaan looga dhigay: ‘Rubuc qarni layaab u lahaa kooxda kubbada cagta ee Barcelona‘. Barcelona ayaa tan iyo sanadkii 1991 kii ku soo guulaystay 44 koob oo Spain iyo Yurub iskugu jira.
Warbixinta ayaa lagu bilaabay: “Xili ciyaareedka 2015/16 waxa uu ku dhamaaday koobab xidhiidh ah oo soo galay gacmaha kooxda kubbada cagta barcelona iyada oo kooxdu ay ku guulaystay UEFA Super Cupka, Club World Cupka, Horyaalka Spain ee La Ligaha iyo Copa Del Rey”.
Qormada ayaa hoos loogu degay waxaana lagu yidhi: “Ku Guulaysiga koobab ee sanadba sanadka ka danbaysa waa wax caan ka noqday Barca, laakiin xaqiiqdii waxay ahayd 1991 kii markii uu u isbadalku bilawday. Markii uu Johan Gruyff uu kooxda ku hogaamiyay koobka horyaalka ayaay xaqiiqdii ka soo wareegtay 25 sanadood, maskaxdii kooxda ayaa isbadaashay, waxayna wadada u xaadhay jiilkii abid ugu guulaha badnaa”.
Barcelona ayaa intaa kadib qormadeeda kaga hadashay halyayo kooxooda ka caawiyay in ay soo gaadho guulo muhiim ah: “Muu jirin yaraansho hayayada ahi kuwaas oo kooxda caawiyay laga soo bilaabo Koeman, Guardiola, Romario, Bakero and Stoitchkov, lagu soo xigsiiyo Ronaldo, Rivaldo iyo Ronaldinho ilaa kuwii ugu danbeeyay ee sida xubnaha e Valdés, Xavi, Puyol, Iniesta iyo saddexda dilaaga ah ee kooxda hadda ee Messi,Suárez iyo Neymar Jr”.
Waxaa warbixinta lagu daray tababarayaashii kooxda Barcelona waqtigan soo maamulay waxaana qoraalka lagu yidhi: “Waxaa sidoo kale jiray tababarayaal wax ku soo kordhiyay guulihii kooxda sida Cruyff, Robson, Van Gaal, Rijkaard, Guardiola, Tito Vilanova iyo tababaraha hadda ee Luis Enrique”.
Waxaa warbixinta lagu soo gabagabeeyay iyada oo Barcelona cadaysay in ayna jirin koox ka koobab badan 25 kii sano ee ugu danbeeyay, waxayna arintan ku cadaysay sawir lagu soo koobay xogta kooxaha koobabka ugu badan ku soo guulaystay waxaana qoraalka lagu yidhi: ” Rubuc qarnigii ugu danbeeyay, waxay kooxdu ku soo guulasytay koobab badan oo tartamada oo dhan ah oo ah in ka badan koox kasta, tirooyinku iyaga ayaa hadla”.
Sida sawirka ka muuqata Barcelona ayaa 14 koob oo La Ligaha ah ku soo guulasytay tan iyo sanadkii 1991 kii waxaana ku soo xigta Real Madrid oo 7 koob ku soo guulaystay, halka Champions Leaque-ga ay shan jeer soo hanatay intii u dhexaysay 1991-2016, waxaana la mid ah Real Madrid oo iyaduna muddadan ku soo guulaystay shan jeer oo Champions Leaque-ga ah. Barcelona ayaa lix jeer ku soo guulasytay Copa Del Rey, waxaana ku soo xigta Atletico Madrid oo afar jeer soo hanatay muddadan.
Barcelon ayaa koobka kooxaha aduunka ku soo guulaystay 3 jeer waxayna ka siman yihiin kooxaha Real madrid iyo Sevilla laakiin waxay shan jeer soo qaaday koobka UEFA Super cupka, waxaana ku soo xigta kooxda AC Milan oo 3 jeer muddadan ku soo guulasytay. Ugu danbayn Barcelona ayaa aad ugu horaysa koobka Spanish Super Cupka oo ay tan iyo 1991 kii ay ku soo guulaystay 10 koob waxaana ku soo xigta kooxda Real Madrid oo 6 jeer soo hantay koobkan.
Haddaba akhriste, haddii aad warbixinta soo akhriday isla markaana aad fiiriso xogta ku duugan, miyay Barcelona noqotay boqorada Spain iyo Yurub ee rubac qarnigii la soo dhaafay? Haddii ayna sidan kuula muuqan adiga, imisa koob ayay kooxda aad taageertaa ku soo guulaystay tan iyo 1991 kii? Miyay koobabka kooxda aad taageertaa ka badan yihiin 44 koob sida warbixintan ku cad oo ay Barcelona ku soo guulaystay?